Filoha RAVALOMANANA Marc : Maro ireo firenen-dehibe vonona hanohana ny vahoaka Malagasy fa mijoroa hatramin’ny farany – MyDago.com aime Madagascar
Filoha RAVALOMANANA Marc : Maro ireo firenen-dehibe vonona hanohana ny vahoaka Malagasy fa mijoroa hatramin’ny farany
Niditra mivantana tamin’ny antso an-telefaonina teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana, rehefa ela ela tsy nahenoina feo. Hafaliana no nandraisan’ny vahoaka izany teny an-toerana. Toy izao raha fintinina fohifohy izay hafatra nataony ho an’ny vahoaka Malagasy izay. Aza mieritreritra hoy izy ianareo hoe manadino anareo aho fa misy fotoana hitenenana ary misy fotoana hanginana.Manana hafatra ho an’ny vahoaka Malagasy ny tenako hoy izy androany. Ny zava-dehibe tsara ho fantarina hoy ny filoha Ravalomanana dia n’inon’inona zavatra hitranga dia ny zavatra tsara atao ao an-tsaina dia ny fahaleovantenan’ny tsirairay avy , ka tsy olon’olom-poana toy izao isika fa nomena’Andriamanitra adidy, mitaky ny hamerenana ny ara-dalàna. Faly tena faly aho hoy izy mampahery anareo mianaka, maheno ary vonona dia vonona niaro hatramin’ny farany ny tolona ianareo ary vonona ny hilaza ny marina , manara-dalàna sy mampiseho fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena isika. Faly aho hoy ny filoha Ravalomanana fa tsy niova amin’ny teniny ny vahoaka Malagasy. Ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny firenena hoy izy ary tsy miafina intsony ireo manao fisainan-dratsy , manararaotra ny fahantra, ny fahorian’ny Malagasy ka ataon’ny sasany ampiviliviliana ny hafa, tsy isika ihany fa izao tontolo izao dia samy mahalala fa tena tsy rariny ary tsy sahaza ny Malagasy izany fihetsika mamoafady izany. Tena manararaotra ny fahantran’ny firenena iray dia mitsabaka ary manao fitaovana ny olona ao anatin’ny fahasahiranana. Tsy afaka handroso ny firenena Malagasy hoy izy raha tsy miova ny toe-tsaina sy ny fomba Malagasy. Iarahantsika mahalala dia ny mampahantra an’i Madagasikara dia ny fanampiana mihantona, 85 % n’ny famantsiambola taloha indrindra ny fampianarana ny ankizy, ny fotodrafitr’asa dia avy any ivelany avokoa. Tsy sanatrian’ny vava hoe ratsy fanahy ny mpamatsy vola hoy ny filoha Ravalomanana fa ireo mpanararaotra no manararaotra ny fahalemen’ny vahoaka.Tsy nahazo fanampiana satria tsy voafidm-bahoaka. Ny 29% n’ny Malagasy dia mahantra fandiranovana. Mafy ho an’ireo ray Iarahantsika mahalala, ary mangidy tena mangidy izany hoe ankizy an-jatony no hampodiana. Mafy dia mafy izany fa indrindra fa ireo ray amandreny. Mankahery ireo raya amandreny ireo ny tenako hoy izy fa ankizy handranto fianarana nefa averina, loza tsy roa mantany izany. Tamin’ny herintaona dia nangataka tamiko ireo ankizy ireo ny hijanonana herintaona. Niresaka tamin’ny oniveriste tany ny tenako ka mbola misy ny sasany mijanona any ary misy ny mangataka ny hody amin’izay. Tsy fotoanan’ny fifanomezantsiny intsony izao hoy ny filoha Ravalomanana fa fotoana izao fifamelana sy firaisankina satria araraotin’ny sasany izao. Ny mpanao politika tsy misy afa tsy 1% nefa ny vahoaka Malagasy mahantra. Tokony hahatsiaro tena isika. Tsy azo afenina intsony fa anisan’ny firenena mahantra indrindra isika. Samy efa vonona daholo hoy izy ny vahoaka Malagasy na ireo kandidà ho fidiana ny 24 jolay hanao fifidianana kanjo tampoka teo dia ny vahiny no milaza tsy atao indray fa tapaka ny famantsiambola. Tampoka teo dia nisy tetika hafa ataon’ny sasany handrahonana indrindra fa ny fahatongavan’ny sasany matetika hitondra hafatra. Aza manadino hoy izy ny mahazo ny Malagasy. Tsy hitan’ny mpitandro ny filaminana intsony izay atao fa mampitahotra fotsiny sisa. Misy ny ataon’ny sasany fitaovana fa samy mahita isika fan oho ny tsy fananana foto-kevitra nijoroana indrindra ny tsy fankasitrahana ny fitondrana ka mivadika tsy mamela ny vahoaka hisafidy. Tsy misy mihitsy hoy ny filoha Ravalomanana firenena 29 manerana izao tontolo izao ka firenena iray no hibaiko hoe ovay ny rafi-panjakana. Ahoana no hahafahan’ireo manery hoe ovay ny lisim-pifidianana, fa atao ahoana fa misy ny tsy mety fa olombelona ihany ny tena. Nisy fivoriana nataon’ireo firenen-dehibe maro an’isa hoy izy dia nitsipaka fa hanohana ny vahoaka Malagasy hatramin’ny farany. Manome toky anareo aho hoy ny filoha Ravalomanana fa maro ireo firenen-dehibe vonna ary mitsetsa antsika fa mijoroa hatramin’ny farany. Manana ny safidiny ny vahoaka Malagasy hoy izy , manana zo tahaka ny firenena eran’izao tontolo izao hiteny. Mila fahaizana mifandray amin’izy ireo . Tsy misy fampandrosoana hoy izy raha tsy misy securité, ary ny securité tsy misy raha tsy mbola hankasitrahan’ny vahoaka ny mpitondra. Raha tsy misy ny fifidianana ataon’ny vahoaka amin’ny fomba demokratika. Aoka isika samy handinika tsara hoy izy fa ny famelana ny vahoaka Malagasy malalaka hisafidy ireo tiany no izy fa mampitahotra no ataon’ny sasany. Mato aho mandina hoy ny filoha Ravalomanana dia misy antony ary fantatro fa vonona ny vahoaka hanao fifidianana. Tsy afaka hampandroso ny firenena isika hoy izy satria matahotra ny olona. Lasa mifamono indrindra tsy mamokatra ny olona. Nahoana hoy ny filoha Ravalomanana no tsy mandinika tsara , hanao fifidianana amin’ny fomba demokratika, amin’ny fomba ahoana no hanatanterahan’ny teniny. Rehefa tsy hainy ny mitantana ny firenena hoy izy dia tsy hilamina mihitsy ireo Malagasy ireo. Manana ny zo amin’ny maha olona azy ny Malagasy, manana ny fahendrena maha izy azy ny mpitsara Malagasy. Manana ny fitondrana maha izy azy ny mpitondra hijoro amin’ny andraikiny. Mahafantatra ny tokony ataony hoy izy ny mpitsara Malagasy sy ny vahoaka. Tsy milamina ny tany sy ny fanjakana raha tsy malala ny olona amin’ny fifidianana amin’ny fomba demokratika. Fotoana maro hoy izy izay no diavintsika, maro ireo mpitolona no iharan’ny tsy rariny sy ny etraketraky ny sasany noho ny ataon’ny sasany. Nahoana hoy izy no tsy ankasitrahana ny ezaka ataon’ny FFKM. N’iza n’iza milaza fa mpanelanelana ka raha tsy mitsidika ny FFKM dia tsy izy izay. Ny fampandrosoana ny firenena dia fitarihana ny olona iasa. Ny fitondrana hoy izy tsy afala ny miteny intsony satria tsy tany tan-dalàna, tsy afaka manao inona satria lasa fandrahonana. Avelao amin’izay izahay hahalalaka. Araraotin’ny sasany hoy izy fa diso tanteraka ny vahoaka, mahantra . Tsy misy filaminana na ny asa raha tsy miara miasa amin’ny firenena hafa isika. Mampahery anareo hoy izy. Miteny aminareo aho hoy ny filoha Ravalomanana fa n’iza n’iza mandalo tsy hahasakana antsika izany. Ny hafatra hoy izy dia tsy maintsy miverina amin’ny soatoavina sy fihavanana isika. Tsy miova amin’ny hevintsika isika, mankatoa ny tany tan-dalàna.
Auteur Solo Razafy*Publié le 3 août 2013 4 août 2013 Catégories Politique
20 pensées sur “Filoha RAVALOMANANA Marc : Maro ireo firenen-dehibe vonona hanohana ny vahoaka Malagasy fa mijoroa hatramin’ny farany”
Izay mihintsy no izy andriamatoa filoha.Ireo no tena CI fa tsy ry Chissano mianakavy.
NY TENIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC !
TENIN-DRAIAMANDRENY TOKOA ARY TENIN’NY FILOHAN’NY FILOHAN’NY FIRENENA IZAY MAHAFANTATRA NY TSIAMBARATELON ‘ NY RESAKA DIPLOMATIKA AO AMIN’NY FIRAISAM-PIRENENA MIKASIKA NY CRISE SY NY FAMAHAHANA NY CRISE MISY ETO MADAGASIKARA
Eo amin’izao savorivory miseho eo amin’ny sehatra politique , izay hatsapana fa tsy misy intsony fitondrana ,tsy misy intsony lalana ,tsy misy flaminanana satria tsy misy fahefana ,dia tsara sy mampahery ny resaka mivantana nataon’ny Floha RAVALOMANANA MARC androany teny amn’ny kianjan’ ny magro teny Behoririka !
Tena tsapa fa nitondra hery sy hafaliana izy ,nitondra hafanana ho an’ny Malagasy izay kivikivy ary nahatsiaro ho irery noho ireo vinavina ratsy ezahan’ireto mpanelanelana sy ny frantsay ho tontosaina et amin’ny Firenena..
Na dia maro aza Isika no manambara fa « vaky , nisara-droa » ny Communauté Internationale » eo amin’ny olana ,ny crise misy eto Madagasikara.. sy eo amin’ny fomba hamaranana izany cise izany
Misy tokoa mantsy ireo mihevitra fa eo amnany fifehezana Isika ,fa tsy manana fiandrianana ,tsy mananazon’olombelona fa izy izy no mandidy sy manapaka eto Amintsika.
Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia nahazo toky amin’ireoFirenena maro fa manohana sy mitsentra Antsika izy ireo ka sy hamela Antsika ho irery..
Isaorana eram-po, eran-tsaina ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC nahatsapa sy nahatsiaro Antsika ao anatin’izao fahakiviana izao..tsapa sy iarahantsika mandray ny fitiavan’ny filohan’ny Firenena Antsika satria tsy navelany irery Isika fa novangiany sy nanehoany ny tsy fanadinoana Antsika.
Misaotra Anao ry mbola Filohan’ny Firenena toavinay sy hajainay !
« ANDRIAMANITRA ANIE HOMBA SY HITANTANA ANAO SY NY ANKOHONANAO LALANDAVA §
4 août 2013 à 17 h 53 min
HO ANTSIKA MALAGASY TSY AZO REBIREBENA !
Nitabataba ny SADC sy ny UA amin’ny feon’ny GIC-M
tao aorian’ny fanambarana nataon’i chissano fa sy mifanarka amin’ny fepetra ny fisorantan’i NENY RAVALOMANA LALAO sy ny mpifanina roalahy izay nandray anjara lehibe teo amin’ny fanonganam-panjakana..ary mahagaga ahy ny fampangininginana izany eloka bevava ,izay tsy ekena noho ny article 96 ao amin’ny Accrds de COTONOU ny fandraisan’ireo olona roa ireo sy ny hafa koa anjara amin’ny fifaninana eo amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny firenena eto M.kra.
IO FEPETRA AO AMIN’NY ACCORDS DE COTONOU DIA MAZAVA ARY MORA AMPIARINA..FA NAHOANA NO REBIREBENA NY MALAGASY KA FEPETRA NOFOROPORONINA NO TADIAVINA AMPIARINA..!
SATRIA VE TSY VOKASIK’IO ARTICLE 96 AO AMIN’NY ACCORDS DE COTONOU NY CANDIDATE RAVALOMANANA LALAO ?
MANGATAKA IZAHAY MBA HAMPIARINA IZAO ANKEHITRINY IZAIO IO FEPETRA IO !
Eo anatrehan’izany dia misy ireo mpanenjika fa tsy nahavita azy ny Malagasy nandritra izay efa-taona mahery izay !
Asa na manaraka tsara ny fizotra ny tolona ireny olona ireo ary koa tsy mahasahana ny fanoherin’ny frantsay ny tolon’ny Malagasy izay nahodikodin’ireo mpanelanelana tarihan’ny SADC sy ny UA ,Ireto olonaireto ( oudraego , franchman ,chissano , sizmao , ramtamne…) izay nanaiky ny fidiran’ny françafrique tao anatin’ny adi-hevitra ,koa sy vitany tafiditra tao izy fa lasa izy indray no nanome ny heviny ary nitarika ny fanalanelanana ,izay niteraka fahavozana toa ny tsatonkatsy an-damosina ho an’ny Malagasy..
dia indreo fa tratra ny famadihana nataon ‘ireto afrikanina ireto tamin’ny fanehoahana ity fepetra tsy valahara manda ny filatsahan’i NENY ho candidate !
EO SIKA IZAO
TSY NAHATENY NY GIC – M MOMBA ITY SAZY NOTABATABAINA BE NANDRITRY NY ERIN ‘ANDRO MAHERY..GINA SY TANKINA IZY IREO KA TSY NAHALEO-PEO
Ireto naany ( rajoelina sy n totankelina ) dia misekoseko sy miedinedina « mananmbotra lalana hanolohana ilay ces nahakenda ireto mpanongam-panjakana
Dia diniho tsara ny tranga-javatra lehibe..Tsy azo afenina intsony ny tsy fifanarahana mihombo ao ao anatin’ny Communauté internatioae ,ka ireo Firenena matanjaka (USA, Chine , Japon ,Allemagne , Russie ,ireo Firenena ao anatin’ny BRIC(Inde ,Afrique du Sud , Brésil , Russie..) dia tsy manaiky ny fanesorana ny candidaturen-‘I NENY sy olona roa hafa..
Izany no nahatankina ny feon’ireto iraky ny SADC sy UA..
Maro Isika no nilaza io korontana ao anatin’ny CI..
FA NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MAC NO NANAMBARA TAMINTSIKA FA MARO IREO FIRENENA IZANY MANAMPY SY MITSENTRA ANTSIKA ,KOA AOKA ISIKA TSY HATAHOTRA !
FA AOKA ,HOY NY FILOHAN’NY FIRENENENA HOE : »MIRAISA HINA ,MIARAHA MIASA ! »
Ay hoy aho hoe : HIVERENO VAKIANA NA HENOINA IO FANAMBARNA NATAON’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NY 03 AOUT 2013 !
MISAOTRA ANAO ANDRIAMATOA FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARX !
« HITAHY ANTSIKA SY HIARO ANTSIKA REHETRA LALANDAVA ANDRIAMANITRA «
Tamin’ny volana marsa i Lalao Ravalomanana no tonga ary raha amin’ny novambra ny fifidianana dia efa ampy enim-bolana izay nipetrahany tao Mada.
Faharoa tsy mitovy mihintsy hoe Hilary Clinton no milatsaka sy ny hoe:Bill Clinton ary efa nitranga izany.Ny vadin’i Jacob Zuma taloha izao(Nkosazana Dlamini) no filohan’ny Union Africaine izay tsy mitovy amin’i hoe:Jacob Zuma no filoha.
Satria raha izany na ny rahalahin’i Marc Ravalomanana aza no eo dia mbola lazaina koa fa i Marc Ravalomanana no eo.
Omaly sendra nanokatra ny MaTv
nandefa io lahanteninao ireo Andriamatoa Filoha
Dia hisaorana manokana eto ny mpitantana io tv io
« mijoroa hatramin’ny farany »: ETO ZAHAY, ary mahavelom-bolo fanantenana moraly avo, maheno ny antsonao avy atsy ampitan-dranomasina atsy!
E! E ! E !
Rediredin’ny maty andrano daoly izay mietsika. Bibidia ireo ary tsy mahagaga raha mandovo-tsihy satria efa ho feno 5 taona no nangalarany.
NY TODY TSY MISY hoy ny ohabolana fa NY ATAO NO MIVERINA !!! Kely sisa no iainan’izy mianankavy dia BASTA !
Minoa fotsiny iany
5 août 2013 à 11 h 40 min
Io anie no lazaiko fa TSIPAKY NY MIALA AINA e!!
Dia ireo izy mandrazona izay azony HIARA-HILENTIKA AMINY IREO e!!!
MIDANADANA NY VARAVARAn’ny FAHAVEREZANA, izay hanaraka iny lalana iny ô!!
» Rehefa ho faty ihan dia matesà rahavako » tė hanao aminy eo koh!!M
MANAM-PETRA NY ASAn’NY satana.
Reveo baona izay mitranga ê ! Izao ny vokany rehefa nitady raharaha toa an’i Rainizafy ilay mena !
Hitsakitsahan’ny olona, dia ny misaotra ihany no mbola teny voalohany avoaka avy ao am-bava !
Entin’ny olona mivarina any an-kady dia mbola faly sy misaotra ihany koa : « Misaotra betsaka re Tompoko, fa raha tsy nisy anareo dia tsy mba nitaingina Tézévé izany izahay mianakvy » !
Izao koa voky taim-balàla, dia mieboebo sy midingin-drambo satria hoe tsy ho fatin’ny hanohanana mandrakizay !
Ny ahy kosa dia mitady raharaha @ i Rabary toka-maso ny GENA sy ny GIGRO : Angano tany atsimo io, Betsileo nitrosa vola t@ n’y Karana. Mody napipiny ny mason’i Lery iray talohan’ny nandehanany. Natao sonia ny « reconnaissance de dette ». Nomarihina tao @ taratasy :
1)Nom : RABARY
2) Signe particulier : Un seul œil
3) Domicile : Manankavaly
4) Délai : 5 ans
Tapitra ny fotoana nifanarahana nefa ny trosa tsy voaloan’i RABARYA toka-maso. Tonga tany amin’ny tanànan’i Rabary (Manankavaly) ny Karana nitaky ny vola. Navorin’ny Karana ny mponina rehetra teo antanàna, RABARY compris. Le hic : RABARY a 2 yeux et non 1 seul comme indiqué dans la reconnaissance de dette !!! Nirava ho azy ny tsena !
Mety amidin’ny FOZA ny menasofina hihinanany sy hisotroany ary rehefa mafy ny atakiny dia hodiany fanina ireo frantay ireo.
Même la HAT ne sait pas où elle va:
Ça me rappelle surtout:
Le Lapin:Que comptes-tu faire pour y parvenir?
Qui EST cette communauté internationale ou CI ?
Par conséquent, ce n’est qu’un cercle de petites alliances qui bloque la situation à Mada mais pas une communauté toute entière.Ils sont minoritaires.Faisons en sorte qu’ils aient tort et appelons-les les « incongrus ».
Et Si ce n’étaient qu’eux, qu’ils s’en aillent.
Quant aux nouvelles stratégies à adopter, il serait souhaitable que la Mouvance Ravalomanana contacte des observateurs internationaux pour examiner tout le processus de mise en place des institutions si elle est dans les normes nationales et internationales.Je suggère la FIDH de Genève ou l’Amnesty International voire les deux.
Izay vaovao ratsy enti´i Simao Salomao, Chissano, Ramtane Lamamra, na ny resaka atoany dia tokony tsy ho henoina fa mamafy lainga sy miezaka mamadika ny zavatra efa mijoro, ka raa malemy isika manaiky ireo sariakolim-bazaha ireo, dia tahaka ny marina mitavozavoza, resin´ny lainga tsara lahatra.
Dia izao ny vendrana rehetra , fa hanova ny CES, dia ho eo ny CES vaovao dia hanaiky hanova lalána marina. Iza marina no nadefa an-dry Chissano, simao matetika aty amintsika, sao voakaramaní TGV izy ireo ?
Tokony ialantsika Mlagasy mihitsy aloha ity mataho-bazaha ity e! vao misy vahiny tonga eto dia mitondra anarana he avy any @ SADC e!, avy any @ UA, CI e! , Iny dia tsy mba misy manadihady sy mandalina hoe,mety ve izany zavatra izany, fa iny tonga dia manaiky.
Ka io fatahoram-bazaha io no araraotin´olona amintsika, ny praiminisitra, na minisitra na olona ambony ao hantonin ´ireo delegasiona mpandainga tahakan-dry simao dia manaiky foan izay lazainy. Efa ela i chissano sySimao noe efa naloan´ny vahoaa malagasy noho ny nataony sy miray tsikombakomba amin´ny mpanongam-panjakana. Izao anefa toa mahazo laka miitsy mitondra ny Baolina eto madagasikara .
Mba ampio ny vhaoka mba ho tonga saina, hazavo mariny ny fandehany fa voarebireby ny vahoaka .
Aza manaiky rebireben´ireo vahiny mainty matim-bola ireo isika, ianareo mpitsara aza maniky rebireben´ireo, fa olom-bitsy no mikotroka sy mandefa an´ireo fa tsy ny CI na ONU.na UA.’
Raha ny marina dia tokony ho samborina izy ireo raha miditra aty amintsika ,satria mapivorivory saim-bahoka, mamafy lainga sy manakorontana ny firenena ihany koa .
Fa naman´i andry rajoleina sy nalefan´ny Frantsay moa dia iny fa manaiky daholo.
Io Andry rajoleina io mihitsy no tokony naongana laoha fa izy no fototry ny zavatra rehetra.
Za koa tena mba miheritreritra izany ry Fanamarihana.
Sady efa impiry izay ireo no tratra NANDAINGA sy NAMADI-DRESAKA????
Ka ilay TANARIVO MIHINTSY NO LASA GENA NOHO NY GENA, noho ny iinona anefa fa tsy noho ilay
VOLA !VONINAHITRA dia aleo mikipy na dia efa hita aza fa maloto no eo alohany eo??MAHONENA!!!!
Efa ilay 5V no lasa Andriamanitry ny maro:
– Vozongo lahy antitra na Viavy mipoerapoera
– Vam 4X4
Ary lasa laozan’ny toetrandro ireto 5F ireto:
Ary raha mandinika ianareo fa Tana ihany io.
6 août 2013 à 20 h 01 min
Latsaka koa aho @’ilay » mipoerapoera »
Ilay voalohany sy faha-3 dia saiky isaky ny tany andalam-« PIHEMORANA »
fa tsy « mandroso » no manjaka io fa ilay izy miaro ilay VONINAHITRA no tena loza be mahavanin-
doza mihintsy ireo ANDEVOZIN’IO TOE-TSAINA IO, izay mahatonga ireo hanao SORONA ny MPIRAY
tanindrazana aminy mihintsy .Ary manjaka izy io izao mantsy.
Jefijefy!indray aza e! raha tian-dranabavy
mampalahelo ahy daholo ianareo
pourquoi Nous a mené en bateau depuis le 9 AOUT 2009 -QUATRE ANNES JOUR POUR JOUR BIENTOT-?
Au profit et bénéfice de quels Pays Nous a-t-on fait perdre du temps , du manque à gagner (scolarisation , santé , salaires perdus ? POURQUOI ?
L’APPLICATION DE CET ARTICLE 96 FACILITE LE TRI DES CANDIDATURES ET ACCERE L’ORGANISATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE , SEULE OCCASION DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS POUR LES MALGACHES DE S’EXPRIMER , D’EXPRIMER LEUR CHOIX DE LA CANDIDATURE QUI EST DIGNE ,CREDIBLE ET CAPABLE DE REMETTRE LE PAYS SUR PIED ET DE FAIRE REPARTIR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS ET ET D’AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES MALGACHES ( EMPLOIS , LOGEMENTS ,HABILLEMENTS , ALIMENTATION ,SCOLARISATION ET GRANDE OPERATION DE SANTE PUBLIQUE…
9 août 2013 à 0 h 37 min
Le jugement à la date du 3 août 2013 pris par la première CES EST IRR2VOCABLE..
La SADC l’Union Africaine ? la France et l’Union Européene qui persiste à réclamer l’invalidité des trois candidaures à l’élection présidentielle commettent la transgression de l’article 21 du Droit de l’hOMME et du Citoyen ,commun à tous les êtres humains..
L’application de l’article 96 des Accords de COTONOU facilite et accélère l’organisation des élections présidentielles par les Nations unies , la ffkm avec surveillance de la Communauté Internatonale sans la SADC?l4union Africaine ?la FRANCE et l’Union Européenne…
Les autres interventions , tergiversations et autres et autres revendications sortent du cadre de la médiation et constituent une ingérence aux affaires intrinsèques des Malgaches …
Précédent Article précédent : MANANDAFY RAKOTONIRINA : Hisy Mantasoa 10 eto
Suivant Article suivant : Ankolafy Ravalomanana : Tsy maika hanolotra olona ao amin’ny CES